Hevitra 5 rehefa hametraka ny toeran'ny findainao amin'ny tsena japoney | Martech Zone
Alarobia, Oktobra 6, 2021 Alarobia, Oktobra 6, 2021 Douglas Karr
Amin'ny maha-toekarena fahatelo lehibe indrindra ahy an'izao tontolo izao, azoko tsara ny antony mahaliana anao miditra amin'ny tsena Japoney. Raha manontany tena ianao hoe ahoana no ahafahan'ny fampiharana anao miditra amin'ny tsena japoney amin'ny fomba mahomby, dia tohizo ny famakiana hahafantarana bebe kokoa momba an'io!
Tsenan'ny finday ao Japon
Tamin'ny taona 2018, ny tsenan'ny eCommerce ao Japon dia mitentina $ 163.5 miliara USD amin'ny varotra. Nanomboka tamin'ny 2012 ka hatramin'ny 2018 ny tsenan'ny eCommerce japoney dia nitombo hatramin'ny 3.4% ka hatramin'ny 6.2% amin'ny totalin'ny varotra antsinjarany.
Fitantanana iraisam-pirenena momba ny varotra
Nanomboka teo dia nitombo be izy io, indrindra momba ny indostrian'ny fampiharana finday. Statista dia nitatitra fa tamin'ny taon-dasa, ny tsenan'ny votoaty finday dia mitentina 7.1 tapitrisa tapitrisa Japoney Yen miaraka amin'ny mpampiasa smartphone 99.3 tapitrisa hatramin'ny martsa 2021.
Ny fampiharana finday be mpampiasa sy be mpampiasa indrindra dia ny serivisy mpitondra hafatra LINE, izay tantanan'ny LINE Corporation, sampana iray ao Tokyo, Navier Corporation, orinasa Koreana Tatsimo. Nanatsara ny portfolio-dry zareo amin'ny LINE Manga, LINE Pay, ary LINE Music izy ireo.
Raha mikasa ny hiditra amin'ny tsenan'ny eCommerce japoney sy ny fampiharana Japoney ianao dia azonao atao ny mieritreritra ny hametraka ny fampiharana anao fa tsy handika azy io, izay hodinihintsika amin'ny fizarana manaraka.
Maninona no zava-dehibe ny paikadim-pitondrana anao
Ofer Tirosh an'i Tomedes nanoratra lahatsoratra iray momba ny zava-drehetra tokony ho fantatrao momba ny famoronana paikadim-pitokanana ho lasa manerantany. Nanazava izy fa ny localisation dia dingan'ny fampiroboroboana ny fifandraisana sy ny fifandraisana amin'ny toerana kendrenao amin'ny alàlan'ny famoronana traikefa ho an'ny mpanjifa / mpampiasa ary vokatra mifanaraka amin'ny safidiny ara-kolontsaina.
Nanazava i Tirosh fa raha ny localization no resahina, mila mandinika ny famoronana paikady izay hametraka amin'ny laoniny ny sehatra misy anao, ny fantsom-barotra ary ny vokatra / serivisinao ianao.
Martech Zone dia nilaza fa raha mikasa ny handeha erak'izao tontolo izao amin'ny fampiharana ianao dia mila hametraka azy io satria manodidina 72% amin'ireo mpampiasa fampiharana no tsy mahay miteny anglisy, ary nomen'izy ireo ohatra i Evernote. Rehefa niditra tao amin'ny tsenan'i Shina i Evernote dia novain'izy ireo ho Yinxiang Biji (Memory Note) ny anaran'ny anaran'ny fampiharana azy ireo, izay nanamora ny fahatsiarovan'ireo mpampiasa sinoa ny anaran'ny marika.
Fa ilaina tokoa ve ny famoronana paikady fametrahana toerana, raha mikasa ny hiditra ny tsenan'i Japon ianao?
Fantatrao ve fa any Japon Facebook, ny tranonkala sy rindrambaiko media sosialy lehibe indrindra eto an-tany, dia tsy tafiditra tamin'ny tsena?
Techinasia no nitatitra izany Mpanjifa japoney sarobidy zavatra efatra raha ny sehatra tambajotra sosialy no resahina ampiasain'izy ireo:
Interface avo lenta an'ny mpampiasa
Ny fahatsapan'ny besinimaro ho sehatra malaza
Miorina amin'ny fanadihadiana an'i Techinasia, ny mpandray anjara rehetra dia namaly fa tsy azo antoka ny Facebook. Ankoatr'izay, namaly izy ireo fa ny interface Facebook dia “misokatra, sahy ary mahery setra” fa tsy “sariaka Japoney” noho ny fisavoritahana sy fahasarotan'ny fampiasana azy ireo.
Ary farany, amin'ny maha loharanom-baovao azy ireo, nilaza ireo mpandray anjara fa aleony mampiasa Twitter kokoa noho Mixi (sehatra media sosialy an-tserasera) sy Facebook.
Tsy nahavita namorona paikady fametrahana toerana i Facebook alohan'ny hametrahana ny sehatra media sosialy ho an'ny besinimaro. Ary tsy izy ireo ihany no tsy nahomby tamin'ny fametrahana ny sehatra an-tserasera.
eBay dia nanomboka tamin'ny faramparan'ny taona 1990, na izany aza, tamin'ny 2002 dia niasa izy io noho ny anton-javatra maro, toa an'i Japon manana fitsipika henjana amin'ny fivarotana fanodinana or efa nampiasaina elektronika raha tsy hoe manana alalana hanao izany izy ireo. Antony iray hafa mahatonga azy ireo tsy nahomby tamin'ny famarotana ny marika tany ivelany dia ny tsy fahazoana izany Ny mpanjifa aziatika dia manome lanja ny fahatokisana. Tsy nahavita namorona sehatra ahafahan'ny mpividy mividy ny fifandraisany amin'ireo mpivarotra izy ireo hahafahany matoky azy ireo.
Tsy azo lavina fa raha nanao localisation ny sehatr'izy ireo izy ireo dia afaka niditra an-tsokosoko tamin'ny tsenan'i Japon. Misy dikany satria ny tanjona kendrena, ny mpanjifa Japoney, dia manana fomba fanao ara-kolontsaina sy fitondran-tena eo amin'ny fiaraha-monina raha oharina amin'ireo firenena tandrefana.
Torohevitra 5 Rehefa manokana ny fampiharana findainao ho an'ny tsena Japoney
Ireto misy fiheverana dimy rehefa manolo-tena ho an'ny tsena Japoney:
Mitadiava manam-pahaizana momba ny localisation - Amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa amin'ireo manam-pahaizana momba ny localization dia afaka manafaingana ny famoronana paikady fametrahana toerana ianao satria hanampy anao amin'ny fikarohana ny toerana kendrenao, ny fametrahana ny sehatra sy ny atiny ary maro hafa. Rehefa manapa-kevitra momba ny manam-pahaizana momba ny toerana ianao dia jereo ny fanamarihan'ny mpanjifany amin'ny tranokala tahaka Trustpilot, ampitahino izy ireo amin'ny mpanome tolotra toerana hafa momba ny vidiny sy ny kalitaon'ny localisation. Mila manontany ianao raha manome antoka izy ireo ary manana ny haitao sy ny fahaizana amin'ny fampiharana eo an-toerana. Izany dia mba hahazoana antoka fa mahazo ny manam-pahaizana momba ny toerana tsara indrindra ianao satria izy ireo dia manana anjara toerana lehibe amin'ny fahazoana miditra amin'ny tsenan'i Japon.
Fantaro ny toerana kendrenao - Araka ny efa voalaza tetsy aloha, ireo manam-pahaizana momba ny toerana anaovanao asa dia afaka manampy anao amin'ny fanaovana fikarohana eny an-toerana. Ankoatry ny ampahany amin'ny fiteny sy ara-toekarena amin'ny fikarohana nataonao dia tokony hoheverinao ireo nuansa ara-kolontsaina. Araka ny voalaza, ny iray amin'ireo antony tsy nahatafiditra Facebook tao amin'ny tsenan'i Japon dia satria aleon'ireo mpampiasa Japoney tsy mitonona anarana raha oharina amin'ny fampiharihariana ny mombamomba azy ireo. Martech Zone nanoratra torolàlana azo ampiharina momba ny varotra ny fampiharana findainao izay mikasika ny zavatra ilaina rehetra. Azonao atao ny mampiditra ny toro-hevitr'izy ireo toy ny famantarana ireo mpifaninana aminao sy mianatra avy amin'izy ireo.
Ampifanaraho amin'ny hetsika kolontsaina sy eo an-toerana - Zavatra iray hafa tokony hodinihina dia ny fikarohana hetsika ara-kolontsaina sy eo an-toerana ary ampanjifaina ny app anao manodidina azy ireo. Any Japon, ny fiovan'ny vanim-potoana dia tena zava-dehibe satria maro amin'ireo hetsika ara-kolontsain'izy ireo no mihodina manodidina azy. Afaka miomana mialoha ny fotoana ianao ary mamorona tetiandro ara-kolontsaina. Nanoratra ny Medium fa mandritra ny fialantsasatra lava, mpampiasa Japoney mandany fotoana be amin'ny fampiharana finday. Ireo fialantsasatra lava ireo dia miseho mandritra ny Taom-baovao, Herinandron'ny Volana (herinandro farany amin'ny volana aprily hatramin'ny herinandro voalohan'ny volana Mey), ary ny Herinandron'ny Volafotsy (tapaky ny volana septambra). Amin'ny fahafantarana an'io tidbit of information io dia afaka manampy anao hanatsara ny UX-nao fampiharana sy ny fifandraisan'ny mpampiasa mandritra ireo fotoana izay miasa ny mpampiasa indrindra.
Miaraha miasa amin'ireo mpiorina media sosialy sy magazay eo an-toerana - Ireo mpampiasa Japoney dia manome lanja ny fananganana fahatokisana amin'ireo orinasa sy marika. Fomba iray marketing ny fampiharana ny findainao ny fiaraha-miasa sy fifandraisana amin'ireo mpiorina amin'ny media sosialy Japoney. Satria ny mpanafatra amin'ny haino aman-jery sosialy dia manana fahatakarana tsara ny mpijery azy sy ny demografika manaraka azy ireo, dia mety hanaporofo fa sarobidy ny fahalalany momba ny fampiharana anao. Saingy manome sosokevitra anao aho mba hanao ny fikarohana ataonao momba ny olona mitaona olona eo an-toerana maneho ny fitsipiky ny orinasa sy ny tanjonao. Ny fiheverana iray hafa dia ny fiaraha-miasa amin'ireo magazay sy mpivarotra eo an-toerana satria hampitombo ny fahatokisan'ny fampiharana anao sy hanamora ny fampiasan'ireo mpampiasa kendrena azy io amin'ny fiainany andavanandro.
Ataovy eo an-toerana ny vidiny - Ny fomba iray hahatonga ny UX ho fampiharana hilentika dia amin'ny alàlan'ny fametrahana ny vidin'ny fampiharana anao. Tsotra satria mahasosotra ny mamadika Yen ho USD ary ny mifamadika amin'izany. Miova hatrany ny tahan'ny fiovam-po ary noho izany, tsy mety ny manana ny volan'ny fampiharana tsy mifanaraka amin'ny volan'ny toerana kendrenao.
Ny famoronana paikady fananganana toerana dia mitaky ekipa matanjaka sy tamba-jotra manomboka amin'ny fanakaramana ireo manam-pahaizana momba ny localization ka hiara-hiasa amin'ireo influencer sy mpivarotra eo an-toerana. Ary misy dikany satria, tsy toy ny fandikan-teny, ny zavatra tadiavinao rehefa mametraka ny lisitry ny fampiharana ianao dia ny fananganana vondron'olona mpampiasa izay tsy matoky ny marika apetrakao fotsiny fa mivadika aminy koa.
Tags: AziaEbayEvernoteJapanaecommerce any Japontsena ecommerce japonAnaranaorinasa orinasamozika tsipikakarama andalanafinday fampiharanalocalisation app mobileofer tiroshtechinasiatomedes